ကြောင်ကတိုး အကြောင်း စပ်မိစပ်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကြောင်ကတိုး အကြောင်း စပ်မိစပ်ရာ
ကြောင်ကတိုး အကြောင်း စပ်မိစပ်ရာ
Posted by ဆူး on Oct 3, 2010 in Arts & Humanities, Food, Drink & Recipes |9comments
ကော်ဖီစေ့တွေ အားရပါးရ စားနေတယ်။
တောထဲမှာ ဆို ဒီလိုဘဲ လိုက်ကောက်ရတယ်။
အနံအရသာ ပိုလာတဲ့ ကော်ဖီစေ့လေးတွေ
အနံ အရသာ ပြည့်စုံလို့ လူတွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။
ဒီလို အထုတ်ကလေးတွေနဲ့ လည်း ရနိုင်ပါတယ်
မွှေးလွန်းလို့ မနေနိုင်လို့ အားကစား လုပ်ရင်း ဒီပုံစံနဲ့လည်း သောက်တယ်။
ဒီလောက် အဖိုးတန်တဲ့ ကြောင်ကတိုး အိမ်မှာ မွေးပြီး ချီးကောက်ကမလား.. နောက်တာနော်.. ဘာသာပြန်မကျွှမ်းကျင်တော့ ပုံလေးနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
အဲဒီ ကော်ဖီ ကတော့ ဈေးကြီးတယ်။ ဘယ်လောက်တန်လဲ ဆိုတာ သိတဲ့ လူတွေဘဲ ကွန်မန့်မှာ ပြောပြလိုက်ပါ
ကြောင်နဲ့မတူတဲ့အတွက် ကြောင်များကိုယ်စား အဲဒီရုပ်ဆိုးဆိုး မှင်စာလိုလို သတ္တဝါလေးကို ကြောင်အမည် ထည့်ပေးထားတာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ သူပုံက ကြွက်နဲ့ပိုဆင်လို့ ကြွက်ကတိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒီပို့ စ်ကို မဖတ်ရသေးသူတွေ ဖတ်ပြီးရင်တော့
ကိုကြောင်ကြီး ချေး ကောက်ချင်တဲ့သူ ပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်၏
အမေဒစ်ကန်တွင် ကိုကြောင်ကြီး တစ်ယောက် ချီးပါရင်း ငွေရှာနေကြောင်း
ယခုပို့ စ် ပါ အကြောင်းအရာ အရ ကောက်ချက်ချသွားပါသည် ။
ဟင်.. civet cat လို့တော့ သူနာမည် ခေါ်တာဘဲ.. ကတ်ဆိုမှတော့ ကြောင်ပေါ့..
ကြောင်မျိုးနွယ်စု မှ ကြောင်ကြီးအားပန်ကြားပါသည်။
ကြောင်အီးအီးမှ ပိုက်ချံ ချာလို့ရသည့်အတွက်.. ကြောင်များ အစား ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းလှပါသဖြင့်.. သို့ဖြစ်ပါ၍ အီးအီးပါတိုင်း ဂုဏ်ယူပါ။ ဟီးဟီး
ဦးလေး နောက်တာနော်.. ချိတ်မချိုးရဘူးနော်။
ကျေးဇူးပါ။ ဒီကြောင်ကတိုးကော်ဖီဆိုတာ ကြားဖူးတာကြာပြီ။ အခုမှ ပုံတွေနဲ့ကြည့်ရတော့တယ်။
ရုပ်စိုးပေမဲ့ကြောင်လေးက ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ မျောက်ရုပ်လေးနဲ့တောင်ခပ်ဆင်ဆင်လေး ။
ကြောင်ချီးက မနံပဲနဲ့ မွေးတယ်ပေါ့နော် အဟဲ … ။
ကိုကြောင်ကြီးရေ… ကြောင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါနော်
တကယ်အစစ် တခွက် ဒေါ်လာ၃၀လောက်ရှိတယ်တဲ့..။
ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေ.. ဆင်ဖြူကောင်တွေကို ကော်ဖီစေ့တွေအတင်းကြွေး.. ဆင်ဖြူတော်eကော်ဖီဆိုပြီး ရောင်းစားရင်ဖြစ်မှာပဲ..။
4.0 out of5stars See all reviews (2 customer reviews) | Like (4)
o be precise, the so-called “civet cat” — more properly known as the palm civet — isn’t reallyacat at all, but ratheradistant cousin of the mongoose. Native to southeast Asia and Indonesia, the palm civet subsists entirely on fruit — in particular the fleshy, red cherry of the coffee tree, which grows abundantly in those parts of the world.
The aroma is rich and strong, and the coffee is incredibly full bodied, almost syrupy. It’s thick withahint of chocolate, and lingers on the tongue withalong, clean aftertaste. It’s definitely one of the most interesting and unusual cups I’ve ever had.
ဆင်တစ်ကောင် အမြန်ဝယ်ပြီး ဦးကင်း ထုံးသုတ် ဆင်ဖြူလုပ်ပြီး သဂျီး ပြောသလို ဆင်ဖြူကော်ဖီ လုပ်ရောင်းရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်။
ဖီ ! ဘယ်လောက်အရသာကောင်းကောင်း ကြောင်ဖင်ကနေ ပြန်ထွက်လာတာချည်းတော့ မသောက်ချင်ပါဘူး
မသိလျှင်တော့ တမျိုးပေါ့ ၊ သိတာနဲ့ အန်ကို ထွက်မယ်